हैदराबादका यी ३ खेलाडी : जो २०२१ मा पूरा आईपीएल खेल्न सक्छन्
१. डेविड वार्नर : सूचीको शीर्ष स्थानमा सनराजर्स हैदराबादका कप्तान डेविड वार्नरको नाम आउँछ । उनले कप्तानका साथ-साथै ब्याटिङमा पनि आफ्नो टिमलाई महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । हैदरावादको ब्याटिङको जिम्मेवारी सबै वार्नरनको काँधमा रहेको हुन्छ । उनी आफ्नो टिमको लागि सुरुबाटै फास्ट गतिमा रन बनाउने गर्दछन् ।
प्छिल्लो आईपीएल सिजनमा वार्नरले सनराइजर्सका लागि सबैभन्दा बढी रन बनाएका थिए । २०२१ मा पनि हैदराबादले उनीबाट यस्तै आशा गर्ने छ । अब आउने आईपीएल सिजिनमा पनि वार्नर आफ्नो टिमको लागि सर्वश्रेष्ठ बन्न सक्छन् । उनी आईपीएल २०२१ को आईपीएल सिजनको सबै म्याच खेल्न सक्छन् ।
२. राशिद खान : अफगानिस्तानका लेग स्पिनर राशिद खान टी-२० क्रिकेटका नम्बर वान बलर हुन् । उनलाई सनराइजर्स हैदराबादले २०१७ को आईपीएल अक्सनमा आफ्नो टिममा समावेश गरेको थियो । राशिद पछिल्लो चार वर्षदेखि लगातार सनराइजर्सको लागि आइपीएल खेल्दै आइरहेका छन् । उनी अब हैदराबादका लागि एक प्रमुख खेलाडी बनिसकेका छन् ।
राशिद पछिल्लो केहि समयदेखि मिडल अर्डरमा आएर आफ्नो ब्याटबाट पनि धेरै रन बनाइरहेका छन् । उनले हैदराबादका लागि ६२ म्याचमा ७ भन्दा कमको इकोनोमिमा ७५ विकेट आफ्नो नाममा गरेका छन् । उनको यो प्रदर्शनलाई देख्दै अब आउने आईपीएलको सबै म्याच खेल्न सक्छन् ।
३. भुवनेश्वर कुमार : भारतीय टिमका फास्ट बलर भुवनेश्वर कुमार सनराइजर्स हैदराबादका लागि आईपीएल खेल्दै आइरहेका छन् । उनी हैदराबादका प्रमुख फास्ट बलर हुन् । उनले सनराइजर्सका लागि आजसम्म ९० म्याच खेल्दै ७.४० को इकोनोमि रेटमा १ सय १२ विकेट आफ्नो नाममा गरि सकेका छन् ।
पछिल्लो आईपीएल सिजनमा भुवनेश्वर चोटका कारण बिच सिजन बाटै टिमबाट बाहिरिएका थिए । अब उनी फिट भइसकेका छन् । भुवनेश्व अब आउने आईपीएल सिजनको लागि तयार भइसेका छन् । अबको आईपीएल सिजनमा उनी आफ्नो टिमको लगि सबै म्याच खेल्दै मैदानमा उत्रिन सक्छन् । आईपीएलको यो सिजनमा सबै म्याच खेल्दै मैदानमा देखिन सक्छन् ।